खुला विश्वविद्यालय अनलाइनमै शिक्षक, अनलाइनमै विद्यार्थी - रोजगारी - साप्ताहिक
न कक्षाकोठा, न डेक्सबेन्च, न कलेज धाउनुपर्ने झन्झट, न त कक्षाकोठामै घण्टौं बिताउनुपर्ने बाध्यता । प्रविधिको विकाससँगै विश्वविद्यालयबाट अध्ययनको प्रमाणपत्र लिन अब कलेज धाइरहनुपर्ने पर्दैन । विश्वको जुनसुकै कुनामा वा घरमै बसेर पनि नेपालकै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न सकिन्छ । ल्यापटप वा कम्युटर तथा इन्टरनेटको सहयोगमा विश्वविद्यालयको उपाधि प्राप्त गर्न नेपालमा पहिलो पटक खुलेको ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय’ले सहज बनाइदिएको छ ।
सन् २०१० मा गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआएनए) तथा शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमति एवं सार्कमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार खुला र दूर सिकाइको विधिमार्फत अध्ययन–अध्यापन सञ्चालन गर्न नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्न थालेको हो ।
संसद्बाट नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन–२०७३ पारित भएपछि नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयका कक्षाहरू २०७५ सालको जेठदेखि कक्षा सञ्चालन भैरहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. लेखनाथ शर्मा बताउँछन् । उपकुलपति डा.शर्मा भन्छन्, ‘विश्वका धेरै देशमा यसको अभ्यास, प्रयोग एवं सञ्चालन धेरै वर्षअघिदेखि नै भैरहेको छ, त्यसैले नेपालमा पनि सबैमा शिक्षाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो सिकाई विधि नै युग सुहाउँदो र सजिलो छ, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयर तथा इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत हामी गुणस्तरयुक्त जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्यमा छौं ।’
हुन पनि विश्वविद्यालयको भर्ना आह्वानको सूचनादेखि शुल्क भुक्तानी, विद्यार्थीको सम्पूर्ण विवरण, कक्षा सञ्चालन सबै अनलाइनमा राखिएको छ । विश्वविद्यालयका आइटी तथा ई–लर्निङ विज्ञ पदमराज पन्त भन्छन्, ‘हाम्रो सिस्टम अलिक पृथक् र प्रविधिमैत्री छ, विद्यार्थी भर्ना भैसकेपछि सफ्टवेयरमा एकाउन्ट आइडी विश्वविद्यालयले नै खोलिदिन्छ अनि घरमै बसीबसी अनलाइन कक्षा लिन पाइन्छ, उनले भने, ‘विगत ६ महिनाको अवधिमा मात्र हामीकहाँ विभिन्न संकायमा ६ सय ३६ विद्यार्थीले युजर आइडी बनाएर अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन् ।’ भर्ना भएका विद्यार्थीलाई सुरुमा तीन दिनको प्रत्यक्ष वर्कसपमार्फत कक्षा कसरी लिने, कसरी युजर आइडी प्रयोग गर्ने, भिडियो कन्फरेन्स कसरी गर्ने, पाठ्यसामग्री, शिक्षकको गाइडलाइन्स, एसिसमेन्ट आदि विषयमा जानकारी लिनेदेखि विद्यार्थी–शिक्षकबीच सञ्चारका बारेमा सिकाउने व्यवस्था विश्वविद्यालयले मिलाउने विज्ञ पन्तले बताए ।
के–के विषय पढाइ हुन्छ ?
विश्वविद्यालय हालसालै मात्र सञ्चालनमा आएकाले यसका पाठ्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा तयार भैसकेका छैनन् । बर्सेनि नया“–नया“ विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्दै जाने योजना विश्वविद्यालयको छ । हाल विश्वविद्यालयमा स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एमफिलका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकाय अन्तर्गत एमफिल इन एजुकेशन, एमफिल इन सोसल साइन्स, पिजी डिप्लोमा इन डिस्टान्स एण्ड ई–लर्निङ, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एण्ड इन्फर्मेसन म्यानेजम्यान्टका कक्षाहरू सञ्चालन भैरहेका छन् ।
त्यस्तै विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायमा एमफिल इन आइसिटी, मास्टर्स इन ई–गर्भनेन्सको अध्यापन भैरहेको छ भने व्यवस्थापन तथा कानुनतर्फ एमबीए, एमएसडिएमजी, बीबीएस, एलएलबीका कक्षाहरू सञ्चालित छन् । यी विषयका लागि विश्वविद्यालयका आफ्नै शिक्षक छैनन् तर दक्ष एवं सम्बन्धित विषयको काममा अनुभवी विज्ञहरूमार्फत अध्यापन गराइ“दै आएको उपकुलपति डा. शर्मा बताउ“छन् । समय सान्दर्भिक पाठ्यक्रमको तयारी तथा पिएचडी तहका विभिन्न शैक्षिक तथा पेशागत कार्यक्रमहरूको तयारी भैरहेको उनले बताए ।
विद्यार्थीको मूल्यांकन एवं सिकाइ
अन्य विश्वविद्यालयभन्दा भिन्न प्रकारको खुला विश्वविद्यालयमा भर्नादेखि अध्ययन गर्ने समय तथा अध्ययन–अध्यापन गराउने तौरतरिका सबै फरक हुन्छ । विद्यार्थीहरूले निश्चित समयमा लागि आवश्यक परेको खण्डमा मात्र कलेज गए पुग्छ । अन्य विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू कलेज वा विश्वविद्यालय जान्छन् तर यसमा विद्यार्थी होइन, विश्वविद्यालय स्वयं विद्यार्थीकहा“ जान्छ । यहा“ प्लस टु उत्तीर्ण गरेपछि रुचि, लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यदक्षता एवं अनुभवका आधारमा भर्ना हुन पाइन्छ । यो विश्वविद्यालयमा सेमेस्टर सिस्टममा पढाइ हुन्छ । एक सेमेस्टरमा तीन पटक तीन–तीन दिनको वर्कसपमा सामेल हुनुपर्छ । यो विश्वविद्यालयमा अन्य सरकारी विश्वविद्यालयमा लाग्ने खर्चभन्दा बढी शुल्क लाग्दैन भने छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था छ । यद्यपि, विश्वविद्यालयको न्यूनतम मापदण्डचाहिं पूरा गर्नुपर्छ । भर्नाका लागि अहिले कोटा सिस्टम निर्धारण गरिएको छ ।
खुला विश्वविद्यालयमा यतिबेला बेलुकी करिब चारघण्टा कक्षा सञ्चालन भैरहेको छ । प्रत्येक दिन फरक–फरक विषयको कक्षा सञ्चालन गरिन्छ । अनलाइन, भिडियो कन्फरेन्स आदिको माध्यमबाट शिक्षक–विद्यार्थीबीच सञ्चार गराइन्छ, यसलाई व्यक्तिगत अनलाइन सिकाइ पनि भनिएको छ । नजानेको वा नबुझेको कुरा अनलाइनमै जिज्ञासा राख्न पाइन्छ । शिक्षक एवं विद्यार्थीको सम्पूर्ण तथ्यांक अनलाइनमै रहन्छ । पढाइ घरमै बसेर हुने भए पनि परीक्षा भने विश्वविद्यालयले तोकेको स्थानमै गएर दिनुपर्छ । परीक्षाअन्तर्गत ४० प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा हुन्छ भने ६० प्रतिशत केन्द्रमै गएर परीक्षामा सामेल हुनुपर्छ । काठमाडौं, पोखरा, धनगढी, कोहलपुर, इटहरी आदि स्थानमा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिन्छ । विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र लिएपछि अन्य सरकारी विश्वविद्यालय सरह सरकारी मान्यता प्राप्त हुन्छ ।
विश्वभर छन् खुला विश्वविद्यालय
विश्वका करिब ६५ मुलुकमा स्थानीय सरकारले खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेको पाइन्छ । भारतमा ३४ वर्षअघि नै खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा लागू भैसकेको छ । त्यहा“को अम्बेडकर तथा इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयमा हजारौं विद्यार्थी पढिरहेका छन् । सन् १९६० पछि बेलायतमा यसको अवधारणा विकास भै तत्कालीन प्रधानमन्त्री होराल्ड विल्सनको पहलमा सोही अवधारण अनुरूप सन् १९६९ मा खुला विश्वविद्यालय स्थापना भएको इतिहास छ । सन् १९७० मा क्यानाडामा तथा १९७० को दशकपछि माल्दिभ्स, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना भएका थिए ।
नेपालमा खुला विश्वविद्यालय खोल्न नीतिगत पहल एवं ऐन निर्माणमा गैर आवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले अगुवाइ गरेको हो । विदेशमा आर्जित सीप एवं ज्ञानलाई नेपालमा हस्तान्तरण गर्न, मुलुकका शहरदेखि दुर्गमका प्रत्येक घर–घर तथा देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पहु“चसम्म उच्च स्तरको शिक्षाको अवसर पु¥याउन यस्तो पहल गरिएको एनआरएनए सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । २०६५ सालमा संघले उठाएको आवाजलाई सरकारले पूरा गरिदिएपछि शिक्षाक्षेत्रमा नया“ आयाम थपिएको एनआरएनएको खुला विश्वविद्यालय कार्यदलका अध्यक्ष डा. प्रमोद ढकाल बताउ“छन् ।
लोकतान्त्रिक मञ्चको दुर्गति